INiger: impi ye-uranium - eyedokhumenti - ye-Afrikhepri Fondation
NgoMgqibelo, Okthoba 24, 2020
ENiger: Impi Ye-Uranium - Idokhumentari
Uakukho ukuncika kwamandla okuholela kubo bonke ubuhlanya. E-France, i-29 March 2014 yokusebenza "I-Earth Hour", ebizwa kabusha ngokuthi "Operation Spider-man", akuyona isigqila sesikhathi esidlule, noma ukuphangwa kwemithombo yamaminerali kuhlanganise neNiger noma ukungcola kwezifunda zonke noma izimo zokuphila zalabo esibalekayo okwenza sazi futhi sizisola ngokwanele ukucisha ama-blisters ngehora. Ihora ngonyaka kusobala ukuthi kungenjalo ngeke kube mnandi noma kungokomfanekiso ... Noma kunjalo.
"Senzani manje ngaphandle kwamanzi? Ubekephi i-Monopoly? "
Ce jour là précisément partout dans le Monde, quelques individus des pays colonisateurs de richesses en tout genre se parent d’arrogance en sortant joyeusement la bougie et en souhaitant le sourire figé et les yeux forcément écarquillés simplement « attirer l’attention sur le changement climatique en cours». Soit dit en passant par une mauvaise lumière : Un changement climatique induit par leur consommation outrancière, un bouleversement qu’ils ont eux mêmes provoqué, qu’ils continuent d’entretenir et qu’ils n’auront assurément aucune peine à oublier dans très exactement soixante minutes. Tandis que 1,3 milliard de personnes à travers le monde continueront à vivre sans électricité comme elles le font tous les autres soirs de l’année.
Ukudabuka nokungenangqondo, uma kwakungeyona enkulu kakhulu. Ukuthembela kwamandla okuholela empeleni kuzo zonke izintambo futhi ngokuvamile kuya kwezinye izinkambiso, amanye amasiko, amanye amanani.
Isibonelo, phakathi kwalokhu kuhlanya, ku-1972, yini okwakuzobe ibe yi-AREVA ngaleso sikhathi ebizwa nge-COGEMA futhi yavula imayini ye-Arlit uranium eNiger. I-France yayijabule kakhulu ngemishini yayo kanye nobuchwepheshe obufakwe ngenjongo yokuthola inzuzo esifundeni sezintambo ezihlanganisa indawo yonke enyakatho yeNiger, ezweni lamaTuaregs. I-COGEMA, ehlotshaniswa nabalingani baseYurophu, yabe yakha izinkampani ezimbili zezimayini: SOMAIR no-COMINAK, okwakuyi-Most State State ikakhulukazi eningi. Umbuso waseNigeria wawuzimele iminyaka eyishumi kuphela futhi kusobala ukuthi awunayo indlela yokutshala izimali. Ngakho-ke wathola izabelo kuphela ezinikezwa yiFrance State. Namuhla, iNiger isanelisa cishe ingxenye yesigamu sama-uranium ase-French.
Kodwa-ke, imali engenayo yeNigerian yi-25 euros ngenyanga futhi ngaphezu kwe-90% yabakwaNigeria abanakho ukufinyelela kagesi. Eminyakeni ye-47 yokuxhashazwa, abantu baseNigeria abazange benze nanoma yiziphi izinzuzo kusuka kulezi zindlela zokukhishwa kwe-uranium. Ngokuphambene nalokho. Esikhathini, i-asidi ye-sulfuric edingekayo ukuze kuhlanganiswe i-ore njengothuli oluhlala isikhathi eside noma umswakama oshisayo omsakazo noma umswakama ovela emithini yokuqothulwa ihlakazeka yi-AREVA. Njengokuba lokho kwakungeke kwanele, cishe iminyaka engamashumi amahlanu ukusikhonza, "i-flagship kazwelonke" isebenzisa futhi irradiates amatafula amanzi angajwayelekile avuselelwe asetshenziswe ngabantu baseTuareg bendawo.
Pho, kungani amadoda evukile?
Kungani bathatha ama-hostage futhi besongela izimayini?
Bangabezwa kanjani, bavikele indawo yabo kanye nekusasa lezingane zabo ngaphandle kokungena kubaqashi noma amaphekula?
Le idokhumenti yeqiniso elingavamile, elinesihloko esithi "I-Niger: I-Battle of Uranium" ivela ku-2012 futhi isithatha ihora futhi. Kodwa ngalesi sikhathi okungenani, lapha sixwayiswa futhi sikhanyiselwa okwesikhashana.
ENiger: Impi ye-Uranium - Isaziso Esihlaza
Okusha okungu-4 kusuka ku- € 16,24
Kusetshenziswe okungu-1 kusuka kuma-35,75 €
Thenga i- € 16,24
Kugcine ukubuyekezwa ngo-Okthoba 24, 2020 9:39 am
Ukuphila Kwemfihlo Kwezihlahla - Peter Wohlleben (Audio)
Izindlela Zokwenza Imfihlo - UDaniel Sévigny
Thuthukisa Ubuholi Bakho - UJohn Maxwell (Umsindo)